Top 5 ghế ngồi xe máy cho bé nào tốt an toàn nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 ghế ngồi xe máy cho bé nào tốt an toàn nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 ghế ngồi xe máy cho bé nào tốt an toàn nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Ikhaya » Umama nengane » Izihlalo ezi-5 ezihamba phambili neziphephe kunazo zonke zezithuthuthu zezingane namuhla
Izithuthuthu ziyindlela yokuthutha ethandwa kakhulu eVietnam. Kodwa-ke, iqiniso lokuthi abazali bavumela izingane ukuthi zihlale kulolu hlobo lwemoto kunezingozi eziningi ezingaba khona uma kungekho ukusekelwa okunamathiselwe njengesihlalo somntwana esizinikele esithuthuthwini. Ngakho kanjani ukukhetha? isihlalo semoto yengane ukulingana okuhle? Ake sithole ngesihloko esingezansi futhi sibheke izihlalo zemoto ezi-5 eziphezulu ezilinganiselwe njengezingcono kakhulu ezinganeni uma zigibela isithuthuthu namuhla.
1 Siyini isihlalo sesithuthuthu?
2 Yiziphi izinhlobo zezihlalo zezithuthuthu ezikhona?
2.1 Ukuhlukaniswa kwezihlalo zezithuthuthu zezingane ngokusekelwe ezintweni zomkhiqizo
2.2 Ukuhlukaniswa kwezihlalo zezithuthuthu zezingane ngokusekelwe ekubekweni kwesihlalo
3 Imibandela yokukhetha isihlalo sesithuthuthu somntwana esifaneleka kakhulu
4 Izihlalo ezi-5 ezihamba phambili zesithuthuthu zezingane
4.1 1. Isihlalo sesithuthuthu se-Beesmart esifakwe ngaphambili sama-scooters
4.2 2. Isihlalo sesithuthuthu ukuze ingane ijoyine i-traffic Mamachi
4.3 3. Isihlalo sesithuthuthu se-Beesmart esifakwe ngemuva
4.4 4. Front ukusonga isithuthuthu esihlalweni for baby
4.5 5. Isihlalo sangaphambili esineluphu nebhande lesihlalo somntwana
5 Amanothi lapho usebenzisa isihlalo semoto yengane
Siyini isihlalo sesithuthuthu?
Isihlalo sesithuthuthu yisihlalo esikhethekile esisetshenziselwa ingane ukuthi ihlale ngokuphepha esithuthuthu ngendlela ephephile nenethezeke kakhulu. Lo mkhiqizo uwusizo kakhulu futhi uyadingeka ukuze izingane zikwazi ukujoyina ngokuphephile ithrafikhi nabazali bazo ebangeni elide.
Nge isihlalo semoto yengane Ngale ndlela, abazali abakwazi kuphela ukuqinisekisa ukuphepha kwezingane zabo lapho behlanganyela emgwaqeni, kodwa futhi basize abazali bazizwe belondeke kakhudlwana lapho ushayela, okusiza ukuvikela ukuphepha kwakho nobabili nengane yakho.
Yiziphi izinhlobo zezihlalo zezithuthuthu ezikhona?
Izihlalo zezithuthuthu manje zithandwa kakhulu ngemiklamo eminingi ehlukene. Nokho, zingahlukaniswa zibe izigaba ezilandelayo:
Ukuhlukaniswa kwezihlalo zezithuthuthu zezingane ngokusekelwe ezintweni zomkhiqizo
Ngokusho kwempahla yomkhiqizo, isihlalo semoto yengane ingahlukaniswa isihlalo se-rattan nesihlalo sensimbi engagqwali. Ngasinye salezi zihlalo sinobuhle nobubi baso.
Ngokukhethekile, izihlalo zama-rattan zilula impela futhi zihlotshiswe ngemibala eminingi ehlukahlukene edonsa amehlo. Lolu hlobo lwesitulo lune-backrest kodwa alunawo umcamelo, ngakho-ke ukuze umntwana ahlale ngokunethezeka, abazali kufanele bazihlomise ngephedi abazoyibeka kulo.
Kodwa-ke, lolu hlobo lwesihlalo se-rattan luthatha indawo enkulu futhi lunesikhathi esifushane sokuphila, ikakhulukazi uma uya emvuleni. Izihlalo zamaRattan nazo zinzima kakhulu ukuzihlanza. Ngokubuyisela, lolu hlobo lwesitulo lunenani eliphansi, kuphela mayelana ne-100 – 150 ayizinkulungwane ze-VND iyunithi ngayinye.
Khonamanjalo, izihlalo zensimbi engagqwali zithandwa kakhulu ngenxa yokuba lula kwazo ngemilenze eqinile namabhande ezihlalo aklanywe esiswini noma emahlombe. Akukhona lokho kuphela, lolu hlobo lwesitulo lulula kakhulu ukuhlanza futhi lunomsebenzi omude wenkonzo. Kodwa-ke, intengo yalesi sihlalo iphezulu impela, mhlawumbe isuka ku-150,000 iye ku-600,000 VND.
Ukuhlukaniswa kwezihlalo zezithuthuthu zezingane ngokusekelwe ekubekweni kwesihlalo
Ngokwesikhundla sesihlalo, izinhlobo zezihlalo zesithuthuthu zingahlukaniswa zibe izihlalo zangaphambili nezihlalo zangemuva. Izihlalo zangaphambili zilungele abantu abaneminyaka eyizinyanga eziyi-10 kuya kwemine, kuthi ezangemuva zilungele izingane ezineminyaka emi-3 nangaphezulu.
Uhlobo lwesihlalo esingaphambili luzosiza umntwana ukuba azizwe elondekile, okwenza kube lula kumama ukuxhumana nomntwana. Khonamanjalo, uhlobo lwesihlalo sangemuva lusiza umntwana ukuba azizwe ekhululekile lapho ehlezi isikhathi eside esithuthuthu.
Imibandela yokukhetha isihlalo sesithuthuthu somntwana esifaneleka kakhulu
Ukukhetha isihlalo semoto yengane akuyona into elula. Lokhu kungenxa yokuthi kuthinta ukuphepha kwengane kanjalo nokunethezeka kwabazali uma beshayela. Kodwa-ke, ungakhetha ngokuphelele isihlalo esifanele ingane yakho ngokusekelwe kulezi zindlela ezilandelayo:
Khetha isihlalo ngokusekelwe eminyakeni yobudala kanye nosayizi wengane yakho. Lokhu kuzokwenza umntwana akhululeke kakhudlwana futhi aphephe, kunciphise ukunyakaza komntwana lapho ehamba.
Khetha isihlalo ngokususelwa kundaba: Izinto zesihlalo sesithuthuthu manje zingahlukaniswa zibe i-rattan nensimbi engagqwali. Ngayinye yalezi zinto inezinzuzo zayo siqu kanye nebubi ukuze abazali bakwazi ukucabangela futhi bakhethele izingane zabo ezithandekayo.
Khetha isihlalo esingcono kakhulu sesithuthuthu sengane yakho ngokusekelwe ohlotsheni lwesithuthuthu: Ngokuya ngesithuthuthu noma imoto, kuzoba nezinhlobo ezahlukene zezihlalo. Ngakho-ke, abazali nabo badinga ukubala futhi bakhethe ukuthenga isihlalo ngokusekelwe kulesi sici.
Khetha isihlalo somntwana ngokusekelwe endaweni yesihlalo: Indawo yokuhlala ingaba ngaphambili noma ngemuva komshayeli. Lokhu kubalwa ngokweminyaka yengane yakho. Ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-3 ubudala, abazali kufanele bazivumele bahlale esihlalweni esingaphambili, kuyilapho nezingane ezineminyaka engaphezu kwengu-3 ubudala ezingakwazi ukuqaphela ukuziphatha kwazo, abazali bangakhetha izinhlobo zezihlalo ezingemuva zezingane zabo.
Izihlalo ezi-5 ezihamba phambili zesithuthuthu zezingane
Uma ngokusekelwe kulezi zindlela ezingenhla akwenzi abazali kube lula futhi bavikeleke nakakhulu ekukhetheni isihlalo sezithuthuthu esingcono kakhulu sengane yabo, ungabhekisela ezinhlotsheni ezi-5 eziphezulu. isihlalo semoto yengane Okuhamba phambili kwamanje kungezansi.
1. Isihlalo sesithuthuthu se-Beesmart esifakwe ngaphambili sama-scooters
I-Beesmart iwumugqa wezihlalo ofanele izingane ezisukela ezinyangeni eziyisi-6 kuya phezulu ezinesisindo esingaphansi kuka-18kg. Lo mugqa womkhiqizo ulungele ama-scooters nezimoto zedijithali, nokho, abazali kufanele babeke kuqala ukusebenzisa izithuthuthu ngokuphepha okuphezulu.
Lesi sihlalo sinefreyimu yesihlalo eyenziwe nge-PP Block eguquguqukayo ehlala isikhathi eside, engenabo ubuthi kubasebenzisi uma isetshenziswa elangeni, emvuleni, njll. Lo mkhiqizo uklanywe ngamabhande ezihlalo angu-3, ​​Ukuletha ukuphepha kwezingane, ukusiza abazali ukuvikela kangcono. izingane zabo ngenkathi beshayela.
Isihlalo sibuye sifakwe i-backrest ephezulu kanye ne-headrest, esekela ingane yakho ukuba ibe nokuma okulungile kokuhlala, kusiza intamo yengane nomgogodla ukuthi ungathinteki ngisho nasesiteji sokuthuthukiswa kwamathambo. Akukhona lokho kuphela, lesi sihlalo siphinde senziwe ngesambulela kanye ne-raincoat ukuze kuvikelwe kangcono ingane ngokumelene nezinguquko eziguquguqukayo zesimo sezulu.
Ikakhulukazi, ngalesi sihlalo, abazali bangasifaka ohlangothini oluphambene nomshayeli, basize omama bazizwe belondeke kakhudlwana lapho bekwazi ukubona nokuxoxa nezingane zabo ngaso sonke isikhathi. Lokhu futhi kusiza ingane yakho ukuba izizwe ivikeleke kakhudlwana kuthrafikhi, lapho ibona abantu abaningi nezimoto eziningi eduze.
Akugcini lapho, lesi sihlalo sesithuthuthu se-Beesmart siyakwazi ukushintsha ubude, okuvumela abazali ukuthi benze ngokwezifiso ubude bengane yabo ukuze ivumelane nokugibela ngakunye. Isihlalo sinemibala eminingi ehlukene, njengohlaza, oluhlaza okwesibhakabhaka noma opinki… ukuze abazali bakwazi ukukhetha ngokukhululeka.
Intengo yesithenjwa: 675,000 VND
2. Isihlalo sesithuthuthu ukuze ingane ijoyine i-traffic Mamachi
I-Mamachi iphinde ibe umugqa wezihlalo zesithuthuthu othandwa kakhulu namuhla. Lesi sihlalo silungele izingane ezineminyaka engu-1 kuya kwengu-8 ubudala, singasetshenziswa kokubili ama-scooters nezimoto zegiya.
Isihlalo senziwa ngensimbi engagqwali, ngakho siphephe kakhulu futhi sihlala isikhathi eside kanye nezinguquko zezulu eziguquguqukayo. Akukhona lokho kuphela, le nto isiza futhi isitulo ukuthi sibe namandla okumelana nomthelela kanye namandla okuzala, kusize omama bazizwe belondeke kakhulu lapho beyisebenzisela izingane zabo.
Ikakhulukazi, enye yezinzuzo ezinkulu kakhulu zalo mugqa wesitulo yi-15-degree backrest. Lokhu kuzosiza ukuvimbela i-hunchback enganeni, kusize ingane ukuthi ihlale kahle futhi ivikeleke ohlelweni lwamathambo olukhula enganeni.
Ngaphezu kwalokho, lesi sihlalo se-Mamachi siphinde sifakwe ibhande lesihlalo esisezingeni eliphansi kanye nendawo yokubeka ingalo, ukusiza ukuvimbela ingane ukuba ingawi lapho ilele kakhulu noma isozela esiminyaminya.
3. Isihlalo sesithuthuthu se-Beesmart esifakwe ngemuva
Isihlalo seBeesmart esibekwe ngemuva siyisihlalo esinezinto eziphezulu, ukwakheka nokuphepha, okufana nolayini wezihlalo zeBeesmart obekwe ngaphambili. Kodwa-ke, lo mugqa womkhiqizo unconywa kuphela ezinganeni ezineminyaka engu-3 ubudala noma ezinesisindo esingu-15 kg noma ngaphezulu.
Ngaphezu kwezinzuzo zokuqina, idizayini eqinile nokufaka nokusetshenziswa kalula, lesi sihlalo se-Beesmart esifakwe ngemuva sithenjwa omama ukuthi bangasikhetha ngenxa yezinye izici ezihlukile. Ngokuqondile, umkhiqizo ufakwe ibhande lesihlalo elinamaphuzu angu-5, elisiza umama ukuthi alungise umuntu osemusha esihlalweni esingemuva, ukugwema icala lokuncika kwengane okubangela ingozi kokubili enganeni kanye nomshayeli.
Akukhona lokho kuphela, lesi sihlalo sibuye sibe nomhlane omude, ongakwazi ukwamukela ngokugcwele umzimba wengane, ngokusekela umzimba wengane, usize ingane ukuba ikhululeke futhi ingakhathali lapho ihlezi isikhathi eside esihlalweni. Indwangu efika nesihlalo nayo ithambile kakhulu futhi kulula ukuyiwasha.
Kodwa-ke, lesi sihlalo sibiza kakhulu futhi indwangu yolayini nayo ingenza umntwana ashise futhi aqine emhlane ngezinsuku ezishisayo zasehlobo.
Intengo yesithenjwa: 319,000 VND
4. Front ukusonga isithuthuthu esihlalweni for baby
Lesi sihlalo sesithuthuthu esigoqekayo sezingane siyaziswa ngokufakwa kwaso okuyingqayizivele uma sisetshenziswa. Ngakho-ke, lo mkhiqizo uthatha indawo encane kakhulu nesikhala ngaphambili, okwenza kube lula kubazali ukulawula imoto.
Kodwa-ke, lesi sihlalo asinalo i-buttock pad, asinalo ibhande lesihlalo kanye ne-loop yangaphambili, ngakho-ke sifaneleka kuphela izingane ezineminyaka engu-3 nangaphezulu. Kodwa-ke, abazali kufanele baqaphele ukuthi uma ingane yakho i-hyperactive, igangile noma kufanele iyisebenzise ukuyithwala ibanga elide, okwenza kube lula ukuthi ilale, lolu hlobo lwesihlalo akufanele lusetshenziswe.
5. Isihlalo sangaphambili esineluphu nebhande lesihlalo somntwana
Lokhu kungenye futhi isihlalo semoto yengane ethandwa kakhulu namuhla. Lesi sihlalo sinenani eligculisayo ngedizayini eyaziswa kakhulu ngokuphepha, esiza ingane yakho ukuthi ithole uhambo oluntofontofo kakhulu.
Ngokukhethekile, lesi sihlalo senziwe ngezinto eziphephile ezinokuqina okuphezulu nomklamo oqinile. Ukwengeza, isihlalo sibuye sifakwe iringi yangaphambili kanye nebhande lokuphepha elinamaphuzu angu-2 ukusiza ukugona nokuvikela umzimba wengane kangcono. Lesi sihlalo futhi kulula kakhulu ukusihlakaza, silungele kokubili ama-scooters nezimoto.
Intengo yesithenjwa: 73,000 VND
Amanothi lapho usebenzisa isihlalo semoto yengane
Khetha eyodwa isihlalo semoto yengane Ukuqinisekisa ikhwalithi nokuphepha kuyisidingo esiphelele. Nokho, kunesinye isici esibaluleke ngokufanayo abazali abangenakuziba, okuyindlela yokusebenzisa lesi sihlalo ngendlela efanele. Ngalesi sikhathi, abazali kufanele banake lezi zindaba ezilandelayo:
Abazali kufanele bakhethe indawo efanele yokuhlala ukuze ingane ikwazi ukuhlala ngendlela efanele, ihlale ngokunethezeka futhi igweme ukuvimba umbono wabazali lapho beshayela.
Lapho ugibele, udinga ukukhumbula ngokuphelele ukubophela ibhande lesihlalo somntanakho.
Izithuthuthu ngemuva kokufaka izihlalo kuzoba nzima kakhulu ukulawula, ikakhulukazi izihlalo zangaphambili. Ngakho-ke, omama abanezibambo ezibuthakathaka kufanele bacabangele lapho befaka lesi sisekeli.
Ngezihlalo zangaphambili, abazali kufanele bathenge umcamelo omncane wokuvikela isifuba somntwana ukuze bagweme ukungqubuzana okungekuhle.
Ngesihlalo esingenaso isinqe, abazali kufanele bazihlomise ngephedi elibekwe ngaphansi kwesingezansi somntwana, okulenze kube lula ukuba umntwana alisebenzise.
Uma isihlalo singasetshenziswa, abazali kufanele basuse isihlalo basigcine endlini ukuze bagweme imvula nomoya, kokubili kuthinta ukuphila kwengane futhi kuvimbele amagciwane ukuthi angaphindaphindeki, akhule futhi abekhona kuma-pads. , umcamelo wendwangu.
Abazali kufanele bahlanze njalo isihlalo somntwana ukuze bavikele ingane ngendlela engcono kakhulu.
Lapho uthenga isihlalo, abazali kufanele bahlole isihlalo emotweni yabo ukuze baqiniseke ukuthi siyasifanela isithuthuthu sakho.
Nazi eziphezulu ezingu-5 isihlalo semoto yengane engcono kakhulu futhi ethandwa kakhulu namuhla. Ngakho-ke, bazali, sicela nibhekisele eziphakamisweni ezingenhla zokukhethela ingane yenu isihlalo sesithuthuthu esifaneleka kakhulu, nisize ingane yenu ibe nohambo oluphephile nolunethezekile nabazali ngesithuthuthu sasekhaya.
Flo là gì? Cách tải app Flo và theo dõi lịch kinh nguyệt | Muasalebang